न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठमाथि किन उठ्यो प्रश्न ? - Sidha News
न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठमाथि किन उठ्यो प्रश्न ?
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्धाको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा तोकिएका दुई न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि रिट निवेदक पक्षका वकिलहरुले प्रश्न उठाएका छन् ।
विघटनविरुद्धको रिट निवेदक पक्षका वकिलहरुका अनुसार, न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाउनुको मुख्य कारण हो– नेकपा एकता भंगको फैसला र पुनवरावलोकनको माग खारेज ।
२३ फागुन २०७७ मा न्यायधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले नेकपा एकतालाई भंग गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र पुरानै अवस्थामा फर्काइदिएको थियो ।
त्यसपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहितले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए । उक्त पुनरावलोकनको निवेदन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको इजलासले खारेज गरिदिएको थियो ।
रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यावसायी टीकाराम भट्टराई न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठ नेकपा विभाजनसम्बन्धी मुद्धाको सुनुवाइ गर्ने इजलासमा रहेकैले प्रश्न उठेको बताउँछन् ।
‘मुद्धाका पक्षको नेकपा विवादको फैसला गर्ने न्यायाधीशहरुबाट निष्पक्ष न्याय पाउँदैनौं कि आशंकालाई हामीले अदालतमा राखिदिएका हौं’ अधिवक्ता भट्टराईले भने । ‘फैसला सर्वसम्मत आउन सक्छ, तीन/दुई हुन सक्छ । तीन/दुई भयो भने अहिले न्यायाधीशमाथि रिट निवेदकले गरेको आशंका पुष्टी हुन सक्छ’ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले आइतबार इजालसमै भने ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संवैधानिक इजलासले तत्कालीन नेकपालाई ठूलो पार्टीको रुपमा मान्यता दिँदै प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिमको मानेको स्मरण गरे ।
११ फागुन २०७७ मा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुने फैसला गर्दा सर्वोच्चले केपी शर्मा ओलीलाई संविधानको धारा ७६(१) बमोजिमको नेकपाको एकल बहुमतको प्रधानमन्त्री भनेको थियो ।
सोही फैसला स्मरण गर्दै थापाले आइतबार इजालसमा भने, ‘पहिले ५ जनाको इजलासले ठूलो पार्टी भनेर फैसला गरे पनि पछाडिको फैसलाले ठूलो पार्टीलाई हेरेन, पार्टी ब्रेक गरिदियो ।’
अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले बमकुमार श्रेष्ठकै फैसलाका कारण नेकपा विभाजित भएको बताए । ‘नेपालको रेगुलर कोर्सलाई त्यो फैसलाले बिथोल्ने काम ग¥यो र त्यो फैसलाबाटै नेकपा फुटेको छ,’ अधिवक्ता बन्दीले भने, ‘तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ श्रीमान् यो इजालसमा बस्न मिल्दैन । हाम्रो अनुरोध हो, दुई जना न्यायाधीश बस्दा राम्रो कि नबस्दा राम्रो हुन्छ विचार गरियोस् ।’
न्यायाधीश केसीको निरन्तरता
न्यायाधीश तेजबहादुर केसी ५ पुस २०७७ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाटै भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्धा हेरेको संवैधानिक इजलासमा थिए ।
‘संवैधानिक इजालसमा न्यायाधीश केसी रहनुले पनि प्रश्न उठाएको छ । उहाँलाई किन राखियो ? वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भन्छन्, ‘पहिले संसद विघटनसम्बन्धी मुद्धा हेरेका सबै न्यायाधीश राखेको भए प्रश्न उठ्दैनथ्यो । उहाँलाई मात्रै किन राखियो ? अरुलाई दोहोर्याइएको छैन । उहाँलाई मात्रै किन दोहोर्याइएको छ ? प्रश्न स्वाभाविक छ ।’
यसपटक संसद विघटनको पक्षमा तीन र विपक्षमा दुई न्यायाधीश बनाउने प्रयत्न भएको भन्दै रिट निवेदक पक्षले ‘प्रि जजमेन्ट’को आशंका गरेका छन् ।
‘फैसला सर्वसम्मत आउन सक्छ, तीन/दुई हुन सक्छ । तीन/दुई भयो भने अहिले न्यायाधीशमाथि रिट निवेदकले गरेको आशंका पुष्टी हुन सक्छ’ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले आइतबार इजालसमै भने ।
इजालसपछि अधिवक्ता भट्टराईलाई ‘के फैसला आउँछ भन्ने अहिले नै आंकलन गर्न सकिने भएर हो तीन/दुईको कुरा गर्नुभएको हो ?’ भनी प्रश्न गर्दा उनले जवाफ दिए, ‘त्यस्तो आशंका पुष्टी हुन नपाओस् भनेर र न्यायालयको गरिमा बचाउन प्रश्न उठेका न्यायाधीशलाई इजलास छोड्न सुझाव दिएका हौं ।’
प्रधानन्यायाधीश जबराले भने अघिल्लो संवैधानिक इजलासमा आफू समेत रहेको भन्दै ‘बायस’ नहुन वकिलहरुलाई आग्रह गरेका छन् । उनले आफ्नो हकमा चाहिं किन प्रश्न नउठाएको भनेर प्रतिप्रश्न समेत गरेका छन् ।
जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले त्यस्तो लागे बिदा बस्न सुझाव दिएका छन् । थापाले इजलासमा रहेका दुई न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न गरे, ‘मेरो के हुन्छ ?’
वरिष्ठ अवस्था थापाले जवाफ दिए, ‘लिभमा बसे भैहाल्छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले केसी र श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न गरे, ‘म पनि छु नि । यो ‘बायस’ हो । बायस नबनौं । तीनै जनालाई भनिदिए भइहाल्यो नि । मेरोमा नैतिक दायित्व केही पर्दैन ?’
प्रधानन्यायाधीशलाई कार्कीले जवाफ दिए, ‘आफैं विचार गर्नुस् ।’
उदाहरण – हरिकृष्ण कार्की
न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाएकाहरुले उदाहरण न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको दिइरहेका छन् ।
५ पुस २०७७ मा भएको संसद विघटनविरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाइका लागि तोकिएको संवैधानिक इजालसमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीका विषयमा रिट निवेदक पक्षले स्वार्थ बाझिने भन्दै प्रश्न उठाएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता रहेकाले स्वार्थ बाझिने भन्दै प्रश्न उठेपछि कार्की त्यसबेला इजलासबाट बाहिरिएका थिए ।
यसपटक त्यस्तै नैतिक प्रश्न केसी र श्रेष्ठमाथि उठेको भन्दै रिट निवेदक पक्षले न्यायाधीश कार्कीको उदाहरण दिएका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले न्यायाधीशबारे प्रश्न उठ्नुलाई अन्यथा लिन नहुने बताए । उनलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले नेकपा विभाजनसम्बन्धी फैसला र यो मुद्धामा के सम्बन्ध छ भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
जवाफमा कार्कीले यसरी नै प्रश्न उठेपछि अघिल्लो संवैधानिक इजलासमा एक न्यायाधीश (हरिकृष्ण कार्की) ले मुद्धा नहेरेको स्मरण गर्दै न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले यो मुद्धा हेर्न नहुने तर्क गरे ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित ५ न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ ।
संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश छान्न न्याय परिषदले १४ न्यायाधीशको रोस्टर बनाएको छ । सोही रोष्टरबाट प्रधानन्यायाधीशले ४ जना न्यायाधीश सहभागी गराएर संवैधानिक इजलास गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
अहिलेको संसद विघटन सम्बन्धी मुद्धाको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेको संवैधानिक इजलास तोकेका छन् ।
सरकारी वकिलको प्रतिवाद
आइतबार रिट निवेदक पक्ष र सरकारी वकिलहरुले संसद विघटनसम्बन्धी मुद्धाको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशद्वयमाथि उठेको प्रश्नबारे बहस गरे ।
सरकारी वकिलहरुले न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले संसद विघटनको मुद्धा हेर्न नहुने रिट निवेदक पक्षका वकिलहरुको तर्कको प्रतिवाद गरे । उनीहरुले नेकपाको नाम सम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला र अहिलको संसदविघटनका बीच कुनै सम्बन्ध नरहेको बताएका छन् ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरुमाथि प्रश्न नउठाउन रिट निवेदकलाई अनुरोध गरे । उनले न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउने हो भने आफूहरुले पनि निवेदन दिने चेतावनी दिए ।
‘फलानो न्यायाधीश हुन्छ र फलानो न्यायाधीश हुँदैन भन्ने हो भने हाम्रो पक्षबाट पनि यो हुन्न भनेर निवेदन हाल्छौं’ उनले भने ‘एउटा रिटमा १४६ जना निवेदक, अरु २५ जना निवेदक र १०० जना कानुन व्यवसायीको कुनै न कुनै न्यायाधीशलाई नाता पर्छ कि पर्दैन ?’
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले सरकारविरुद्धका कुनै न कुनै मुद्दा हेरेको उल्लेख गर्दै बडालले भने ‘प्रधानमन्त्री विपक्षी भएको कुनै पनि मुद्धा यो अदालतले हेर्न मिल्दैन । श्रीमानहरु सबैले सरकारविरुद्ध कुनै न कुनै मुद्धा हेर्नुभएको छ ।’
उनले अघि भने ‘यदि हेर्न मिल्छ भने यो इजलास कम्पिटेन्ट छ ।’
महान्यायाधिवक्ता बडालले संसद विघटनको मुद्धामा अदालतलाई दबाब दिन खोजिएको आरोप लगाएका छन् । ‘मैले बुझेको स्वच्छ सुनुवाइ भइरहेको छैन, मिडिया ट्रायल किन भइरहेको छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।
बडालले अघि भने ‘पक्षका तर्फबाट उपस्थित भएकाहरुले पालना गर्नुपर्ने कुरा के के हो ? फेयर ट्रायलको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ ।’
नायव महान्यायधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले निवेदकको मागमै प्रश्न उठाए । ‘संसद पुनर्स्थापना संगसंगै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग गर्नुभएको छ’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सर्वोच्चले हो र ? यो राजनीतिक विषय हो र संविधानमा छ यसको व्यवस्था ।’
प्रधानन्यायाधीश जबरा बीचमै बोले, ‘प्रष्टै छ नि … ।’
अदालतले संसद विघटन र प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग राखेर परेको निवेदकलाई राजनीतिक विषय भनेर खारेज गरिदिनुपर्ने नायव महान्यायधिवक्ता पाण्डेयले बताएका छन् ।
सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले फैसला नआउँदै पक्ष र विपक्षमा कति जना (न्यायाधीश) हुन्छन् भनी तर्क गरिएको भन्दै प्रतिवाद गरे ।
‘फैसला नआउँदै तीन र दुई हुन्छ भनेर कसरी भनेको ? इजासलमा बहस नै सुरु भएको छैन । इजलासमा भएका पाँच जनाको पाँच वटै तर्क हुन सक्छन् । यस्तो तर्क गरेर हुन्छ ?’ रेग्मीले भने ।